Helitaanka Tareen khafiif ah oo ku socda jidka toosan ee u adeegta bulshooyinka si siman
Nolosha nool waxay la shaqaysaa aasaaskii ugu weynaa ee adduunka iyo hay'adaha maaliyadeed si loo dhiso nooc cusub oo ah dhaqdhaqaaqa magaalooyinka oo wax ka qabta arrimaha dhaqdhaqaaqa jirka iyo kuwa aadanaha, abuurista guryaha la awoodo ee la mariyo hareeraha waddooyinka, dib u habeynta waxbarashada, iyo dib u qaabeynta dhalinyarada, loogu talagalay hagaajinta nolosha dakhliga hoose dadka.
Citizens Living ayaa loo doortay Minneapolis / St. Baaskiilada Fursadaha ee Baaskiilka mid ka mid ah shantii asalka ahaa Barnaamijka isdhexgalka (TII) 2010. Mashruucan wuxuu bilaabay inuu ballanqaado beddelidda nolosha dadka dakhligoodu hooseeyo iyo bulshooyinka ay ku nool yihiin magaalooyinka dalka oo dhan. Wada-hawlgalayaasha goobta waxay qaadeen habab kale oo horumarinta bulshada iyada oo la dhisayo miisaska qaybaha iskudhafka ah iyo isku-darka deeqaha maaliyadeed ee maal-gelinta raasumaalka. Waxqabadka Is-dhexgalka ee Minneapolis / St. Bawlos wuxuu si gaar ah diiradda u saarnaa horumarinta waxa noqon lahaa nidaamka tareenka fudud ee cagaaran.
Iyadoo loo marayo shaqadeeda Khadka Cagaaran, Waddooyinka Fursadaha ayaa awooday inay xaqiijiyaan in dadka dakhligoodu hooseeyo ay ku yiraahdeen qorshaha horumarinta gaadiidka iyo dhaqaalaha ee gobolka. Inta lagu jiro dhismaha, Waddooyinka Fursadaha waxay taageerteen ganacsiyada laga tirada badan yahay iyo kuwa haajiriinta ee kuyaal Khadka Cagaaran waxayna hubiyeen in ku dhowaad 400 ka mid ah ay ku jireen ganacsi si ay uga faa'iideystaan horumarinta marka mashruuca uu dhammaado. Waxa kale oo ay ka shaqeysay sidii loo badali lahaa siyaasad federaal ah oo khaldan oo fara badan si loo hubiyo in Khadka Cagaaran uu joojin lahaa meelaha laga tirada badan yahay. Isticmaalka Deynta Citizens Living, Xarumaha Fursadaha ayaa awooday in ay maal-galiyaan in ka badan 450 cutub oo guryo la awoodi karo oo ku yaalla Khadka Cagaaran. Hadda oo Khadka Cagaaran uu furay, Shaqooyinka Caadiga ee Nolosha ayaa u wareegay si ay u taageeraan horumarinta "shuruudaha sinnaanta" taasoo xaqiijinaysa in gobolka uu horumariyo si uu ufududo dadka dakhliga hoose iyo dadka midabka leh.